दिशाहीन काँग्रेस : देउवा–पौडेल शक्ति सङ्घर्षको उत्कर्षमा | Ratopati
दिशाहीन काँग्रेस : देउवा–पौडेल शक्ति सङ्घर्षको उत्कर्षमा
सहमतिका लागि सभापतिले पहल नगरेको पौडेल पक्षको आरोप
काठमाडौँ– काँग्रेसले पार्टी विधान बहुमतबाट पारित गरेपछि सुरु भएको काँग्रेस नेताहरुबीचको सम्बनध अझै सुधार भएको छैन, जसका कारण काँग्रेस नेताबीचको विवाद थप उत्कर्षमा पुग्ने देखिएको छ ।
यसका लागि उनीहरुले आआफ्नो समूहको बैठक बोलाएर आफू अनुकुलको रणनीति बनाउन व्यस्त छन् । दुवै पक्षका आआफ्नै स्वार्थका कारण यसबीचमा भएका सहमतिका प्रयासले समेत मूर्त रूप पाउन सकेको छैन । अडान कायमै रहेकाले आगामी चैत चार गतेका लागि बोलाइएको बैठक समेत बस्ने वा नबस्ने भन्ने अन्यौल कायमै छ ।
एक चरण जिल्ला भ्रमण सकेर काठमाडौँ फर्केका देउवाले आफूनिकटका नेताहरुलाई बोलाएर पौडेल र सिटौला पक्षलाई साइजमा ल्याउन कस्तो नीति लिने भनेर छलफल चलाएका छन् ।
छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार पौडेल र सिटौलाले विभिन्न बहानामा पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोजेको भन्दै लामो समयसम्म निर्णय नगर्दा क्षति हुने भएकाले बहुमतकै आधारमा भए पनि निर्णय गरेर अघि बढ्न सभापति देउवालाई सुझाव दिएका थिए । आगामी चैत गते बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकबाट अनुशासन र निर्वाचन समिति तथा नेविसङ्घको तदर्थ समिति कसरी गठन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको देउवा निकटका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
यस्तै बैठकका अर्का सहभागी सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अनुशासन समति, निर्वाचन समिति र नेविसङ्घको तदर्थ समितिलाई पूर्णता दिने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए ।
साथै उनले पौडल र सिटौला समूहसँग सहमतिको प्रयासका लागि संवाद भइरहेको दाबी गरे । ‘सहमतिको भरपुर प्रयास गर्ने छौँ । सहमति नजुटे बहुमत केही होइन भन्न पनि त मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सबै विषय अल्पमतले भनेकै मान्नुपर्ने भन्ने पनि तर्क जायज हुँदैन । न्यायिक र जायज कुरामा उहाँहरू पनि सहमतिमा आइदिनुपर्छ ।’ सभापतिले काम नै गरेनन्, जिम्मेवारी नै दिएनन् भन्ने गुनासो भइरहेको भन्दै उनले अब छट्टै सबै कुराहरु ठीक हुने बताए ।
‘पार्टीका विभाग र समितिलाई पूर्णता दिन धेरै नै ढिला भइसकेको छ । अब पनि अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने हाम्रो निष्कर्ष छ । हिजोको बैठकले ४ गते बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट त्यसलाई समाधान दिनुपर्छ भन्ने कुरा भएको हो । त्यसको समधान पनि गर्छौं । त्यसमा नै हामी केन्द्रित भएका छौँ’ डा. महतको भनाइ छ ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडलले भने अहिलेसम्म सहमतिका लागि देउवा पक्षले कुनै पहल नै नगरेको बताएका छन् । आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन जिल्ला भ्रमणमा रहेका पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘पछिल्लो समय शेरबहादुरजीले सहमतिको कुनै प्रयास नै गर्नु भएको छैन । बैठक स्थगित भएपछि उहाँ विभिन्न जिल्लाको भ्रमणमा निस्किनुभयो । अनि म पनि अहिले जिल्ला भ्रमणमा छु । यसबीचमा सहमतिको कुनै प्रयास भएको छैन ।’
चाक्सीबारी बैठकले सहमतिको वातावरण नबेने बैठकमै निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसयता समिति गठनबारे सहमति जुटाउन संवाद नभएको नेता केसीले बताए । ‘समझदारी केही नभई बहुमतबाटै निर्णय लिन खोजिए हामी बैठकमा सहभागी हुन सक्दैनौँ । हामीले सहमतिबाटै अघि बढाउन विकल्पसमेत दिएका छौँ,’ उनले भने ।